Qiso Gaaban Oo Ku Tuseyso Wanaaga Deeqsinimadu Leedahay,- Deeqsinimada ayaa loo beretamay yaase u dheereeyey? | Hooyga Barbaarinta Qoyska & Wanaaga Bulshada Hooyga Barbaarinta Qoyska Iyo Wanaaga Bulshada - Www.Kobciye.Com
Published: May 8, 2015, 11:02 am
Xaatim Ad-daa’i ayaa la waydiiyey cid kaa deeqsisan weligaa ma aragtay ? haa buu yidhi: waxaan arkay wiil agoon ah oo reer Day’i ah habeen baan ku soo hoyday halkii uu deganaa wuxuuna haystay 10 neef oo adhi ah markaasuu intuu kacay ayuu ii qalay mid ka mid ah oo ii keenay waxyaabaha uu ii keenay waxaa ka mid ahaa xubin macaan oo neefka uu qalay kamid aheyd! xubintii ayaa ii macaanaatay markaasaan idhi waar dhadhan wacanaa xubantani , markaasuu haddana kacay inankii oo neef kale soo qalay oo xubintiisii ii keenay!
Aniguna ma dareemin wuxuun baan idhaahaa macaanaa, mar walba intuu kaco ayuu neef qalaa oo xubintii si gaara iigu soo sameeyaa sow 10 kii neefba wuu dhameeyey siduu iigu soo qalayey! subixii markaan toosay ayaan arkay halkii uu adhiga ku gawracayey oo wada dhiig ah,
markaasaan waydiiyey dadkii waar waxan oo dhiig ahi waa maxay? markaasaa la igu yidhi ninkani wuxxuu lahhaa 10 neef oo adhi ah adiga ayuuna kuu wada qalay xalay! markaasaan ku idhi waar maxaad sidaas u samayeysay ? wuxuu yidhi: waxaa ka mid ah doqoniimada in wax walaalkaa u baahan yahay oo jeclaysanayo inaad sii haysato ood kaga bakhaysho!
Xaatim oo deeqsinimada inankaas aad ula yaabay ayaa isaga laftiisii la waydiiyey oo Xaatimow maxaad ugu abaal guday ilayn deeqsinimo cid kaa badisaa ma jirtee? wuxuu yidhi Xaatim: waxaan siiyey inankaas 300 oo neef oo geel cas cas ah,iyo 500 oo neef oo adhi ah,
markaasaa la yidhi: Xaatimow dee ninkaas adigaa ka deeqsisanaa mar hadaad waxaas oo dhan ku deeqday? maya ayuu yidhi isagaa iga deeqsisanaa waayo isagu wuxxuu igu wada casuumay wixii uu hayey oo dhan aniguse xoolahaygii in ka midaan siiyey isaguse wuu i wada siiyey , markaas isagaa iga deeqsisanaa.
haloo beretomo waxa wanaagsan sida deeqsinimada runta iyo wanaaga iyo daacada,